တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေး အဖွဲ့မှ နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ် ရေးဆွဲပြီး အစိုးရထံ အဆိုပြု တင်ပြမည်
11/13/2013 09:00:00 AM political-news
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၏ လိုင်ဇာဆွေးနွေးပွဲတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအဖွဲ့ (NCCT)မှ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး၏ အကြံဥာဏ်များ ရယူကာ နှစ်ဖက်သဘောတူ စာချုပ်ရေးဆွဲပြီး အစိုးရထံသို့ မကြာမီ အဆိုပြု တင်ပြမည်ဟု နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်က တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC က သဘောထား ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရန် အပါအ၀င် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အာဏာခွဲဝေသုံးစွဲရေး အချက်များ ပါဝင်သည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၏ လိုင်ဇာ ဘုံသဘောတူညီချက် ၁၁ ချက်ကို ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် တိုင်းရင်သား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည့် NCCT တို့၏ မြစ်ကြီးနား ဆွေးနွေးပွဲတွင် အစိုးရအား တရားဝင် ပေးအပ်ခဲ့သည်။
"လိုင်ဇာ ဘုံသဘောတူညီချက် စာချုပ်မှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်းကြား၌ ရရှိသော သဘောတူညီချက် စာချုပ်မျှသာဖြစ်၍ နှစ်ဖက်သဘောတူ စာချုပ်ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက် မရှိခဲ့ပါ။ နှစ်ဖက်သဘောတူ စာချုပ်တစ်ရပ်ကို NCCT အဖွဲ့မှ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး၏ အကြံဥာဏ်များကို ရယူပြီး ရေးဆွဲပြုစု၍ မကြာမီ အဆိုပြု တင်ပြသွားနိုင်ရန် စီစဉ်လျက် ရှိပါသည်။ UNFC အနေနှင့်လည်း အစွမ်းကုန် ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်" ဟု UNFC ၏ သဘောထား ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
အစိုးရ၏ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီက နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မူကြမ်းတစ်ခုကို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ၏ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေး အဖွဲ့ထံသို့ မြစ်ကြီးနား ဆွေးနွေးပွဲ ပထမနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ပေးအပ်ခဲ့ရာ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး၏ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ခေါင်းဆောင်များထံသို့ ပြန်လည်တင်ပြမည်ဟု NCCT အဖွဲ့မှ တုန့်ပြန်ခဲ့သည်။
UNFC အဖွဲ့ အနေဖြင့်လည်း ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ နောက်ဆုံးအဆိုပြု မူကြမ်းကို လေ့လာသုံးသပ် နေဆဲဖြစ်ကြောင်းနှင့် လိုင်ဇာသဘောတူညီချက် စာချုပ်ရရှိခဲ့သည့် လိုင်ဇာကွန်ဖရင်နှင့် ယုံကြည်မှု တိုးတက်ခိုင်မာမှု ရရှိခဲ့သည့် မြစ်ကြီးနား ဆွေးနွေးပွဲကို အလားအလာကောင်း ဖြစ်သည်ဟုမြင်ကြောင်း သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါဝင်သည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့် အစီအစဉ် ရပ်ဆိုင်း၊ လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပြန်လည်သုံးသပ် စိစစ်ပြီးမှသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဆုံးဖြတ်
11/13/2013 08:58:00 AM political-news
နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်က ပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမြင်ကွင်း
နိုဝင်ဘာလမှစ၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများ တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့် အစီအစဉ်အား ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး လာမည့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပြန်လည်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပြီးမှသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်က ပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်က ပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် မလှိုင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမောက်က လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများ ပြန်လည်လျှော့ချရေး ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီး အဆိုတစ်ရပ် တင်သွင်းခဲ့သည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက အဆိုကို ထောက်ခံကာ ဓာတ်အားခ တိုးမြှင့်ကောက်ခံမှုအပေါ် ကန့်ကွက်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပြီးနောက် လွှတ်တော်က ယခုကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လာရောက်ရှင်းလင်းရာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နှုန်းထားများ တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ကို ရယူဆောင်ရွက်မည်ဟု ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းက "ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပိုင်းက တင်ပြသွားတာက လျှပ်စ မဟာ ဗျူဟာမူဝါဒနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နှစ် ၃၀ အပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးသွားတာ ရှိပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးချက်တွေဟာ ပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင် မိမိတို့နိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ လျှပ်စစ်ဥပဒေဟာ ဒီနေ့ခေတ်ကာလနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ရှိ၊ မရှိ။ ဒီအပေါ် မူတည်ပြီးတော့ လျှပ်စစ်ဥပဒေ ရေးဆွဲပြီးတော့ မူကြမ်းအဖြစ် လွှတ်တော်တစ်ရပ်က တင်ပြထားတာလည်း ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက နှစ် ၃၀ စီမံကိန်းဆိုတာ လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင် ဒါလည်းလေ့လာ သုံးသပ်ရမယ့် အကြောင်းကို ၀န်ကြီးကသော် လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးတဲ့ သူကသော် လည်းကောင်း ဆွေးနွေးသွားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ် ၃၀ စီမံကိန်းနဲ့အတူ ဒီနေ့နိုင်ငံမှာ လိုအပ်တဲ့ လျှပ်စစ်များ ရရှိရေးအတွက် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာကို လက်တွေ့ကျတဲ့ စီမံကိန်း တစ်ခုတော့ ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်" ဟု ဆိုသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကက "ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ကာလ အတွင်းက အရေးကြီး အဆိုအပေါ် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ကိုယ်စား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဒီအဆိုပေါ် မူတည်ပြီးတော့ လျှပ်စစ်မီတာခများ တိုးမြှင့်ကောက်ခံခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းထားမယ်။ လာမယ့်ဘတ်ဂျက်နှစ် ကျတော့မှ ပြန်လည်သုံးသပ် စိစစ်ပြီးမှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ပါမယ်ဆိုတဲ့ တင်ပြချက်ကလည်း ပြည်သူများရဲ့ လိုအပ်ချက်၊ ပြည်သူများရဲ့ ဆန္ဒများကို လေးစားစွာ ဖော်ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်သလို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုလည်း ဒီလိုပဲ တင်ပြတယ်လို့ မိမိအနေနဲ့ မှတ်ယူပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီနေ့ဆွေးနွေးတာက အရေးကြီး အဆိုပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက အနီးကပ်ဆုံး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ လာတင်ပြဖို့ဆိုတဲ့ ကိစ္စမှာ ၀န်ကြီးလာရောက် ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အဆိုပါ အတိုင်းပဲ လျှပ်စစ်တိုးမြှင့် ကောက်ခံခြင်းကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းပြီး လာမယ့်ဘတ်ဂျက်နှစ်မှာ စိစစ်ဆောင်ရွက်မယ် ဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီးတော့ လွှတ်တော်မှာ မှတ်တမ်းတင် ထားရှိဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ကြေညာပါတယ်" ဟု ပြောကြားသည်။
လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနမှ အများပြည်သူ၏ ဆန္ဒသဘောထားနှင့် လွှတ်တော်၏ ဆုံးဖြတ်ချက် ရယူခြင်း မရှိခဲ့ဘဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများကို အများပြည်သူ (အိမ်သုံး) တစ်ယူနစ်မှ ၁၀၀ ယူနစ်အထိအတွက် ယခင်ဈေးနှုန်းအတိုင်း ၃၅ ကျပ်၊ ၁၀၁ ယူနစ်နှင့်အထက် ၅၀ ကျပ်၊ အများပြည်သူ (စက်မှု၊ စီးပွားရေး၊ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း၊ ယာယီ) တစ်ယူနစ်မှ ၅၀၀၀ ယူနစ်အထိအတွက် ၁၀၀ ကျပ်၊ ၅၀၀၁ ယူနစ်နှင့် အထက်အတွက် ၁၅၀ ကျပ်၊ အစိုးရဌာန ရုံးသုံးအတွက် တစ်ယူနစ် ၅၀ ကျပ်နှင့် အစိုးရဌာန စက်မှုသုံးအတွက် တစ်ယူနစ် ကျပ် ၁၀၀ ဖြင့် အသီးသီး ပြောင်းလဲကောက်ခံမည် ဖြစ်သည်ဟု ကြေညာခဲ့ပြီး ဝေဖန်မှုများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
ထပ်မံလွတ်မြောက်လာမည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများတွင် ပါဝင်နိုင်ရန် ဦးနေ၀င်း၏ မြေးနှစ်ဦးကို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား စိစစ်ရေးကော်မတီက ထည့်သွင်း စိစစ်နေသော်လည်း ဗိုလ်မှူး ၀င်းနိုင်ကျော်အား ထည့်သွင်း စစ်ဆေးခြင်း မရှိသေးဟုဆို
11/13/2013 08:57:00 AM political-news
အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေ၀င်း၏မြေး ဦးအေးနေ၀င်းနှင့် ဦးကျော်နေ၀င်းတို့၏ မိသားစုက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား စိစစ်ရေး ကော်မတီသို့ လိပ်မူပြီး စာပေးပို့ထားကြောင်းကို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား စိစစ်ရေး ကော်မတီဝင် ဦးဘိုကြည်က အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်ပြုပါက ပါဝင်နိုင်ရန် စိစစ်နေသော်လည်း မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ဆက်ဆံရေးအား ဖော်ထုတ်ခဲ့သူ ဗိုလ်မှူးဝင်းနိုင်ကျော်အား ထည့်သွင်းစိစစ်ရန် အစိုးရဘက်က လက်ခံခြင်း မရှိသေးကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဦးဘိုကြည်က "နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား စိစစ်ရေး ကော်မတီကို ဦးအေးနေ၀င်းနဲ့ ဦးကျော်နေ၀င်းတို့ရဲ့ မိသားစုတွေက စာပို့ထားတယ်။ သူတို့ကျတဲ့ ပုဒ်မက ၁၂၂ (၁) ဖြစ်တော့ ပုဒ်မအရ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားထဲမှာ အကျုံးဝင်တယ်။ နောက်တစ်ချက်က သူတို့ဟာ မျှတတဲ့ တရားစီရင်မှု မရခဲ့ကြဘူး။ သူတို့က ထောင်ထဲမှာ နေသားလည်း တော်တော်လေး ရှိသွားပြီ။ အဓိကကျတဲ့ ဒေါ်စန္ဒာဝင်းနဲ့ ဇွဲနေ၀င်းတို့ကို လွှတ်ပေးပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ဘာကြောင့် ချန်ထားတာလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ကနေ အစိုးရဘက်ကို မေးခွန်းထုတ်ထားတာပါ" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းကဆက်၍ နိုင်ငံရေး ပုဒ်မများကို တောင်းစဉ်က ဦးအေးနေ၀င်း၊ ဦးကျော်နေ၀င်း၊ ဗိုလ်မှူး ၀င်းနိုင်ကျော် စသည့်သူများ၏ စာရင်းများအား ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း မရှိသောကြောင့် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် မပေးခဲ့သနည်း ဆိုသည်ကိုပါ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဦးဘိုကြည်က မိသားစုများအနေနှင့် မိမိတို့ မိသားစုဝင် ခင်ပွန်း၊ ဇနီး၊ သားသမီးများ နိုင်ငံရေးအရ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ် ကျခံနေရသည်ဟု ယုံကြည်ပါက ၈၈ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းသို့ လည်းကောင်း၊ AAPP သို့ လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဟောင်းများအဖွဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ သမ္မတရုံးသို့ လည်းကောင်း စာရင်းပေးပို့ပါရန် တိုက်တွန်းကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဦးအေးနေ၀င်းနှင့် ဦးကျော်နေ၀င်းတို့ အမှုအား စိစစ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး နောက်တစ်ခေါက်ပေးမည့် လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်တွင် ပါဝင်ခြင်း၊ မပါဝင်ခြင်းမှာ သမ္မတ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်တွင်သာ မူတည်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဗိုလ်မှူး ၀င်းနိုင်ကျော်အား ၂၀၀၉ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး မြောက်ကိုရီးယားနှင့် မြန်မာ ပြုလုပ်လျှက်ရှိသည့် မြေအောက် လိုဏ်ခေါင်းများ၏ ဓာတ်ပုံများအား ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်ဟု စွပ်စွဲကာ သေဒဏ် ချမှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရ . . .
ထို့အတူ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်ဆံရေးအား ဖော်ထုတ်ခဲ့သဖြင့် ဖမ်းဆီး သေဒဏ်ပေးခံရသူ ဗိုလ်မှူးဝင်းနိုင်ကျော်အား အစိုးရဘက်က နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ် စိစစ်ခြင်းမပြုဘဲ ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့ကြောင်း ၎င်း၏ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်မိုးဆမ်းက ပြောကြားသည်။ ဗိုလ်မှူးဝင်းနိုင်ကျော်နှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ စိစစ်ရေး ကော်မတီဝင် ဦးဘိုကြည်က "ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဗိုလ်မှူးဝင်းနိုင်ကျော် အပါအ၀င် သူ့အမှုတွဲတွေဖြစ်တဲ့ ကိုမြတ်သင်း၊ အောင်ကျော်လင်း၊ မောင်မောင်လွင်တို့ တစ်အုပ်စုလုံးကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ သူတို့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျွန်တော်တို့ အစိုးရဘက်နဲ့ ညှိရမယ်။ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နဲ့ကို ညှိရမှာပါ။ ဒါကတော့ သမ္မတ လုပ်ရမှာပါ။ ကော်မတီထဲမှာတော့ ပြည်ထဲရေး ဒုဝန်ကြီးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အကျေအလည် ညှိရမှာဖြစ်ပါတယ်"ဟု ပြောကြားသည်။ ဦးဘိုကြည်က ဆက်လက်ပြီး ဗိုလ်မှူးဝင်းနိုင်ကျော်တို့ အမှုတွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၎င်းတို့အနေနှင့် အဘယ်ကြောင့် လွှတ်ပေးသင့်သည်ကို ပြောရမှာ ဖြစ်သလို အစိုးရဘက်မှလည်း ဘာကြောင့် မလွှတ်သည်ကို ပြောမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေး ပြောကြားလိုက်သည်။
ဗိုလ်မှူး ၀င်းနိုင်ကျော်၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်မိုးဆမ်းက ၎င်း၏ ခင်ပွန်းကို ၁၉၅၀ အရေးပေါ် ပုဒ်မ ၃ နှင့် သေဒဏ်ချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဗိုလ်မှူးဝင်းနိုင်ကျော်တို့ အမှုတွဲအား အဖွဲ့အစည်းများဘက်က တင်ပြခဲ့သော်လည်း အစိုးရဘက်က ထည့်သွင်း စိစစ်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဗိုလ်မှူး ၀င်းနိုင်ကျော်သည် အကျဉ်းထောင်အတွင်း နှလုံးရောဂါနှင့် သွေးတိုးရောဂါကို ခံစားနေရကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ၎င်းအနေနှင့် သမ္မတထံ စာတိုက်မှ အကြိမ်ကြိမ် စာပေးပို့ခဲ့သည်ဟုလည်း ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဗိုလ်မှူးဝင်းနိုင်ကျော်နှင့် ပတ်သက်ပြီး သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်က "ဗိုလ်မှူး ၀င်းနိုင်ကျော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် တောက်လျှောက် ကြိုးစားနေပါတယ်။ အစည်းအဝေးတိုင်းမှာ သူ့ကိစ္စကို ဦးစားပေး ပြောပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့အမှုက ၁၉၅၀ ပြည့် အရေးပေါ်ဥပဒေနဲ့ ထောင်ချထားတာ ပါတယ်လေ။ ဒါနိုင်ငံရေးပြစ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ သူ ဘယ်ကလာတယ်၊ ဘာလုပ်တယ်၊ သူဘယ်သူလဲ သိဖို့ ကျွန်တော့် အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ပုဒ်မကိုပဲ ကြည့်တယ်" ဟု ပြောကြားလိုက်သည်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ စိစစ်ရေး ကော်မတီဝင် ဦးဘိုကြည်က အစိုးရအနေနှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားစာရင်း လုံးဝမရှိသလို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ထားချက်လည်း မရှိကြောင်းနှင့် လွှတ်သည့်အခါတွင်လည်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ် ခြွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်ပေးခြင်း မဟုတ်သောကြောင့် နိုင်စစ်ကော်မတီတွင် ပါဝင်သည့် အဖွဲ့များအနေနှင့် မကျေနပ်မှုများလည်း ရှိနေသည်ဟု သိရသည်။ ထောက်လှမ်းရေး တပ်မှ ထောင်ဒဏ် ကျခံရသူ ၂၂ ဦးမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသဖြင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားစာရင်း၌ ထည့်သွင်းခြင်း မရှိကြောင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ စိစစ်ရေး ကော်မတီဝင် ဦးရဲအောင်က ပြောကြားသည်။
ဦးအေးနေ၀င်း၊ ဦးကျော်နေ၀င်း၊ ဦးဇွဲနေ၀င်း၊ ၎င်းတို့၏ဖခင် ဦးအေးဇော်ဝင်းတို့အား ၂၀၀၂ ခုနှစ်က နိုင်ငံတော်အား သစ္စာဖောက်မှု ပုဒ်မ ၁၂၂/၁ နှင့် တစ်သက်တစ်ကျွန်း ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး မိခင်ဒေါ်စန္ဒာဝင်းနှင့် အဘိုးဖြစ်သူ ဦးနေ၀င်းတို့အား နေအိမ် အကျယ်ချုပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ဒေါ်စန္ဒာဝင်းမှာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး ဦးဇွဲနေ၀င်းနှင့် ဦးအေးဇော်ဝင်းတို့မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့ကာ အကျဉ်းထောင်အတွင်း ဦးအေးနေ၀င်းနှင့် ဦးကျော်နေ၀င်းတို့နှစ်ဦးသာ ကျန်နေခဲ့သည်။ ဗိုလ်မှူး ၀င်းနိုင်ကျော်အား ၂၀၀၉ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး မြောက်ကိုရီးယားနှင့် မြန်မာ ပြုလုပ်လျှက်ရှိသည့် မြေအောက် လိုဏ်ခေါင်းများ၏ ဓာတ်ပုံများအား ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်ဟု စွပ်စွဲကာ သေဒဏ် ချမှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ငွေကြေးအရင်းအနှီး လိုအပ်နေသော မြန်မာကုမ္ပဏီများ စင်ကာပူ စတော့အိတ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ရန် စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်လာ
11/13/2013 08:57:00 AM
စင်ကာပူစတော့အိတ်ချိန်း အတွင်းပိုင်း တစ်နေရာအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-Bloomberg)
ငွေကြေးအရင်းအနှီး လိုအပ်နေသော မြန်မာကုမ္ပဏီများသည် စင်ကာပူ စတော့အိတ်ချိန်း ဈေးကွက်သို့ ၀င်ရောက်ရန် စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်လာကြောင်း ရိုက်တာသတင်းဌာနက ဖော်ပြလိုက်သည်။
မြန်မာကုမ္ပဏီများနှင့် နီးကပ်စွာ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ဥပဒေ ကုမ္ပဏီများက လာမည့်နှစ် အနည်းငယ်အတွင်း စင်ကာပူ စတော့ဈေးကွက်တွင် စာရင်းဝင်မည့် မြန်မာကုမ္ပဏီ ခြောက်ခုမှ ၁၀ ခုအထိရှိကြောင်း ပြောကြားသည်။
မြန်မာကုမ္ပဏီများ အနေနှင့် စင်ကာပူ စတော့အိတ်ချိန်းသို့ ၀င်ရောက်ရန် ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှု စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်သည်ဟု သိရသည်။ လက်ရှိအချိန်ထိ ထိုစံနှုန်းများ ကိုက်ညီရန်မှာ အလှမ်းကွာဝေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေ ပညာရှင်များနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များက သုံးသပ်သည်။
မြန်မာ သူဌေးကြီး အချို့ကို ယခင် အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းကာ တရားမ၀င် စီးပွားရှာမှုများကြောင့် အမေရိကန်က စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများ ရှိနေခြင်းက စတော့အိတ်ချိန်း စာရင်းဝင်ရန် ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသည့် အကြောင်းရင်း တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဥရောပ သမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုများကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း အမေရိကန်က ၎င်းတို့၏ ပိတ်ဆို့မှုများကို ရွှေ့ဆိုင်းရုံသာ ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်။
လက်ရှိ စင်ကာပူ စတော့အိတ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ထားသည့် တစ်ခုတည်းသော မြန်မာကုမ္ပဏီမှာ Yoma Strategic Holdings ကုမ္ပဏီ တစ်ခုတည်းသာဖြစ်ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် အများပိုင် ကုမ္ပဏီပြောင်းကာ စာရင်းဝင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ရှယ်ယာဈေးများမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် လေးဆမြင့်တက် သွားသည်ဟု သိရသည်။
"မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိ ပြောစရာ စတော့ဈေးကွက် မရှိဘူး။ ငွေချေးစာချုပ် ဈေးကွက်မရှိဘူး။ ဘဏ်လုပ်ငန်းဈေးကွက် မရှိဘူး။ တချို့ ကုမ္ပဏီတွေမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ရှိပေမယ့် ငွေသားဖြစ်နိုင်မှု ရင်းမြစ်မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ်" ဟု Yoma ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် အန်ဒရူးရစ်ကတ်က ဆိုသည်။
မြန်မာ ကုမ္ပဏီများထဲမှ ငွေရင်းလိုအပ်နေသည့် ကုမ္ပဏီများအတွက် ဘဏ်ချေးငွေ ရရှိမှုမှာ ခက်ခဲသလို မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ပြရပြီး အတိုးနှုန်းမှာလည်း ကြီးမြင့်နေသည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဝင် အသိအမှတ် ပြုထားခြင်း မဟုတ်သော်လည်း ရောင်းသူဝယ်သူ တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေး ရောင်းဝယ်သည့် စနစ်ဖြင့် စတော့အရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်သည့်ဈေးကွက် Over the Counter ဈေးကွက်လည်း မရှိသေးဘဲ Myanmar Securities Exchange Center (MSEC) တွင် စာရင်းဝင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုသာ ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ် အစောပိုင်းက တည်ထောင်ခဲ့သော သစ်တောထွက်ပစ္စည်း ဖက်စပ်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဘဏ်တို့ဖြစ်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အများပိုင်ပြောင်းသည့် ကုမ္ပဏီအချို့ ရှိသော်လည်း MSEC တွင် ပြောင်းလဲခြင်း မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ အစ္စလာမ်မစ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (OIC) ကိုယ်စားလှယ်များ လာရောက်မည့် ခရီးစဉ်ကို ရန်ကုန်မြို့၌ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ၊ စစ်တွေမြို့၌ ရဲများက ဟန့်တားသဖြင့် ဆန္ဒပြမည့် အစီအစဉ် ပျက်ပြယ်
11/13/2013 08:56:00 AM political-news
နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်က OIC လာရောက်မည့် အစီအစဉ်အား ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူများ ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဘက်မုခ်မှ စတင် ထွက်ခွာလာသည်ကို တွေ့ရစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ အစ္စလာမ်မစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (OIC) လာရောက်မည့် ခရီးစဉ်ကို နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်က ရန်ကုန်မြို့၌ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး စစ်တွေမြို့၌ ရဲများက ဟန့်တားသဖြင့် ဆန္ဒပြမည့် အစီအစဉ် ပျက်ပြယ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
OIC ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး Ekmeleddin İhsanoğlu နှင့် OIC အဖွဲ့ဝင် အစ္စလာမ်မစ် ခုနစ်နိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးများ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်၌ စစ်တွေမြို့သို့ သွားရောက်ရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်က ရန်ကုန်မြို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော ဆန္ဒပြမှုများမှာ အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် နံနက် ၁၁ နာရီခန့်က လည်းကောင်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေတိဂုံဘုရားရှေ့တွင် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်က လည်းကောင်း ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆန္ဒပြသူများသည် OIC GET OUT စာတန်းပါ ဗီနိုင်းများ ကိုင်ဆောင်ခြင်း၊ မြန်မာပြည်၏ မည်သည့်နေရာမဆို အိုအိုင်စီရုံး စိုက်ခွင့်မပြု၊ မြန်မာပြည်၏ ပြည်တွင်းရေးကို မည်သည့်နိုင်ငံ၊ မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ၀င်ရောက် စွက်ဖက်ခွင့်မပြု၊ ခိုးဝင် ဘင်္ဂါလီများအား ရခိုင်ဒေသမှ အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံများသို့ ခေါ်ဆောင်သွားရန် စသည်တို့ကို ကြွေးကြော် တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် ပြုလုပ်သည့် ဆန္ဒပြမှုကို ဗဟိုလမ်းတစ်လျှောက် သံဃာနှင့် ပြည်သူ ၃၀ ခန့် လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး "မလာပါနဲ့ OIC ၊ သွားခွင့်မရှိ ရခိုင်ပြည်" စသည့် ကြွေးကြော်သံများနှင့် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဘက်မုခ်၊ ကြေးသွန်းဘုရားရှေ့တွင် သံဃာနှင့် ပြည်သူ စုစုပေါင်းအင်အား ၁၀၀၀ ခန့်သည် OIC မြန်မာပြည်သို့ ၀င်ရောက်ခြင်း၊ လေ့လာခြင်းများကို လုံးဝသဘောမတူ၊ မလိုလားကြောင်း ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
ဆန္ဒပြမှုကို မကွေးပရိယတ္တိ စာသင်တိုက် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးပါမောက္ခမှ ဦးဆောင်ပြီး မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ကြေးသွန်းဘုရားမှ စတင် ထွက်ခွာလာကာ ဆူးလေစေတီ၊ မြို့တော်ခန်းမရှေ့သို့ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်က OIC လာရောက်မည့် အစီအစဉ်အား ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြသူများကို ရန်ကုန်မြို့တော် ခန်းမရှေ့တွင် တွေ့ရစဉ်
ဆန္ဒပြမှုကို ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ရဲစခန်းတို့၏ တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော် ဦးပါမောက္ခက မိန့်ကြားသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် ယင်းဆန္ဒပြမှုကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားရေးရာ ၀န်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်ကလည်း ဆန္ဒပြသူများနှင့် လာရောက် စကားပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"ကျွန်တော်က အခြေအနေကို လာပြီးကြည့်တဲ့သဘောပါ။ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကို တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး ဆန္ဒပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းပါတယ်။ ဒါဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒ၊ ပြည်သူတွေရဲ့အသံ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ဦးဇော်အေးမောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက OIC ကိုယ်စားလှယ်များ လာရောက်မည့် ခရီးစဉ်ကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့သော်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဟန့်တားသဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မည့်သူများ လူစုခွဲခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ဆန္ဒပြသူများသည် OIC GET OUT စာတန်းပါ ဗီနိုင်းများ ကိုင်ဆောင်ခြင်း၊ မြန်မာပြည်၏ မည်သည့်နေရာမဆို အိုအိုင်စီရုံး စိုက်ခွင့်မပြု၊ မြန်မာပြည်၏ ပြည်တွင်းရေးကို မည်သည့်နိုင်ငံ၊ မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ၀င်ရောက် စွက်ဖက်ခွင့်မပြု . . .
သို့ရာတွင် နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် စစ်တွေ၊ ကျောက်ဖြူ အပါအ၀င် အခြားမြို့များ၌ OIC ကိစ္စ ဆန္ဒပြကန့်ကွက်ရန် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
" OIC အဖွဲ့ လာတာကိုတော့ ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ ကန့်ကွက်စရာ မရှိဘူး။ သူတို့ ဘာသာဝင်တွေကို လာကြည့်တာ၊ ထောက်ပံ့တာ လုပ်တာမျိုးတော့ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရက ရုံးဖွင့်ခွင့်ပေးတာ၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ထိပါးတဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေ လိုက်လျောတာ ရှိလာရင်တော့ ပခုက္ကူ သံဃာတော်တွေ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသွားမယ်" ဟု ပခုက္ကူမြို့ ဗောဓိမဏ္ဍိုင်ကျောင်းတိုက်မှ ဦးလက္ခဏက မိန့်ကြားသည်။
" OIC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မိတ္ထီလာမြို့ကို ရောက်လာရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ မြို့လူထုအနေနဲ့ ကန့်ကွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့ အသင့်ပြင်ထားတယ်" ဟု မိတ္ထီလာမြို့ခံ ကိုအောင်မြင့်ကိုက ပြောကြားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်းက OIC ရုံးများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်ခွင့် မပြုရေးအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ဆန္ဒပြမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သို့သော် OIC ရုံး ဖွင့်လှစ်ရန်ကိစ္စမှာ ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့် မကိုက်ညီသဖြင့် ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း အစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
OIC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ ခရီးစဉ်တွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံရန် မရှိကြောင်း သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် The Daily Eleven သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
"နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ တွေ့ဆုံရန် အစီအစဉ် မရှိပါဘူး။ ဒီခရီးစဉ်ဟာ OIC ရုံးဖွင့်ရေးနဲ့လည်း မဆိုင်ပါဘူး။ အဓိကက ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အခြေအနေများကို လေ့လာနိုင်ဖို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များနဲ့သာ တွေ့ဆုံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများနဲ့လည်း တွေ့ဆုံပြီး အဓိကက ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းရေး၊ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး အခြေအနေများကို လေ့လာနိုင်ဖို့သာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ဦးရဲထွဋ်က ဆိုသည်။ ဦးရဲထွဋ်သည် ယခင်က OIC အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြီး ကြားဝင် ဖျန်ဖြေပေးရန် မလိုအပ်ဟု ပြောဆိုခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်သည်။
OIC သည် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ ၅၇ နိုင်ငံပါဝင်သည့် နိုင်ငံတကာ အစ္စလာမ်မစ်အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂပြီးလျှင် ဒုတိယအကြီးဆုံး နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် Organization of Islamic Conference အဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ အစ္စလာမ်မစ်များ၏ လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး အကျိုးစီးပွားများကို ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းပေးရန် ဖြစ်သည်။
OIC သည် အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံများအကြား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို မြှင့်တင်၍ နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် ရည်ရွယ်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ၏ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းကို လက်ခံခြင်းမရှိဘဲ ၁၉၉၀ ခုနှစ် သြဂုတ် ၅ ရက်နေ့တွင် ရှရီယာ ဥပဒေနှင့်အညီ ကိုင်ရို လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းကို ထုတ်ပြန်၍ လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့သည်။
OIC ကိုယ်စားလှယ်များ လာရောက်မည့် ခရီးစဉ်ကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒ ပြနေကြသူများ ကမ္ဘာအေးစေတီ လမ်းအတိုင်း ဆူးလေသို့ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒ ပြနေကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ကြည်နိုင်)
သို့သော် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ပဋိညာဉ်စာတမ်းအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်၍ ကိုင်ရို လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းအား ဖျက်သိမ်းပြီး ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းအား စတင် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန် ၂၈ ရက်တွင် လက်ရှိအမည် Organisation of Islamic Cooperation သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
OIC သည် ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများ၌ ဝေဖန်ရှုတ်ချမှုများနှင့် လူနည်းစု မွတ်စလင်များအပေါ် ဖိနှိပ်မှုများရှိသည်ဟု စွပ်စွဲမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း OIC အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများအကြား လူနည်းစုဝင်များအပေါ် ဖိနှိပ်မှုများအား ဖြေရှင်းရန် ပျက်ကွက်မှုကြောင့် နိုင်ငံတကာ ဝေဖန်မှုများ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ဆီးရီးယားရှိ Kurds လူမျိုးစုဝင်များ၊ အီရန်ရှိ Ahwz လူမျိုးစုဝင်များ၊ အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိ Hazars လူမျိုးစုဝင်များ၊ ပါကစ္စတန်ရှိ Baluchis လူမျိုးစုဝင်များနှင့် ရီမင်ရှိ Al-Akhdam လူမျိုးစုဝင်များအပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် OIC ကို နိုင်ငံတကာမှ ဝေဖန်မှုများ ရှိနေသည်။
OIC သည် ရှရီယာဥပဒေကို မူတည် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်များတွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအကြား ရှရီယာဥပဒေ သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးသည်လည်း အဓိက ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်သည်။ ရှရှီယာ ဥပဒေဆိုသည်မှာ အစ္စလာမ် ဘာသာရေး ဥပဒေတစ်ခု ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဥပဒေတွင် ရာဇ၀တ်မှု၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးမှ အစပြု၍ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှု၊ အစားအသောက်နှင့် ဆုတောင်းခြင်း အစရှိသည့် အကြောင်းအရာများကိုပါ အစ္စလာမ် ဘာသာရေး ထုံးတမ်းအစဉ်အလာနှင့်အညီ သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ရှရီယာ ဥပဒေအရ ခိုးမှု ကျူးလွန်သူများ၊ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်သူများကို ခေါင်းဖြတ်သတ်သည့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည့်အပြင် အစ္စလာမ်ဘာသာကို စွန့်ခွာပြီး ဘာသာပြောင်းသူများအားလည်း အပြစ်ရှိသူ ရာဇ၀တ်သားအဖြစ် ကွပ်မျက်ခြင်းခံရမည်ဟု ရေးသားထားသည်။
ရှရီယာဥပဒေတွင် အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးများအားလည်း လွန်မင်းစွာ ကန့်သတ် ချုပ်ချယ်ထားပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် လင်ယောက်ျား၏ ထိန်းချုပ်မှု အောက်တွင်သာ အလုံးစုံရှိရန် သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ရှရှီယာဥပဒေတစ်ခုလုံးသည် အစွန်းရောက်လွန်းပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်ရေး ကြေညာစာတမ်းနှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည့်အတွက် အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံ အများစုသည် ရှရီယာဥပဒေကို အလုံးစုံ ကျင့်သုံးလေ့ မရှိကြဘဲ တစ်စိတ် တစ်ဒေသလောက်သာ ကျင့်သုံးလေ့ရှိသည်။
နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာတွင် ရွှေတန်ချိန် ၇ ဒသမ ၁၅၃၃ တန်နှင့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ ၈ ဒသမ ၁၃ ဘီလျံခန့် ပိုင်ဆိုင်မှုရှိကြောင်း ဗဟိုဘဏ်မှ လွှတ်တော်သို့ လာရောက်ရှင်းလင်း
11/13/2013 08:55:00 AM political-news
ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စောဦးက နိုင်ငံခြားသုံး သီးသန့်ငွေစာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်၌ လာရောက်ရှင်းလင်းစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားသုံး သီးသန့်ငွေစာရင်းတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက် စာရင်းများအရ နိုင်ငံတော်မှ ပိုင်ဆိုင်သည့် ရွှေပမာဏမှာ တန်ချိန် ၇ ဒသမ ၁၅၃၃ တန်ခန့်နှင့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ ပိုင်ဆိုင်မှု ပမာဏမှာ စုစုပေါင်း ၈ ဒသမ ၁၃ ဘီလျံခန့်ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စောဦးက နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားသုံး သီးသန့်ငွေစာရင်းတွင် ရွှေစာရင်းနှင့် နိုင်ငံခြားသုံး ငွေစာရင်းဟူ၍ရှိပြီး ရွှေစာရင်းကို မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က ထိန်းသိမ်းထားရှိပြီး နိုင်ငံခြားသုံး ငွေများကို ဗဟိုဘဏ်နှင့် နိုင်ငံပိုင် ဘဏ်များတွင် ငွေသားအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ပြည်ပရှိ ၎င်းဘဏ်များ၏ အဆက်အသွယ် ဘဏ်များ၌ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ငွေစာရင်းများ၌ လည်းကောင်း ထိန်းသိမ်းထားရှိကြောင်းနှင့် နိုင်ငံခြားသုံး သီးသန့်ငွေ ပမာဏမှာ အချိန်ကာလအရ ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်း ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စောဦးက ပြောကြားသည်။
"ပြည်ပရှိ အဆက်အသွယ် ဘဏ်များမှာ ငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိ ရခြင်းက နိုင်ငံတော် အနေနဲ့ ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံခြား ကြွေးမြီရယူခြင်းနဲ့ ပေးဆပ်ခြင်းစတဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ပြည်ပနဲ့ ငွေပေးငွေယူ နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေရတဲ့အတွက် ပေးချေလွယ်ကူ စေရန်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါတယ်" ဟု မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၇)မှ ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုးက နိုင်ငံပိုင်ရွှေနှင့် နိုင်ငံခြားငွေနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းရန် ပြောကြားခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းက လာရောက်ဖြေရှင်းရန် ညွှန်ကြားစာ ပို့ခဲ့ပြီးနောက် ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စောဦးက လာရောက်ဖြေကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ယင်းသို့တင်ပြခဲ့သည့် နိုင်ငံတော်၏ ရွှေစာရင်းလက်ကျန် (Gold Account) နှင့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ လက်ကျန်စာရင်း (Foreign Currency)တို့၏ အခြေအနေများအား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က မှတ်တမ်းတင်ကြောင်း နာယကက ကြေညာခဲ့သည်။
OIC မြန်မာပြည်သို့လာရောက်လေ့လာမည့် အစီအစဉ်အားကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်
11/12/2013 07:28:00 PM political-news
OIC မြန်မာပြည်သို့ လာရောက်လေ့လာမည့် အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီအချိန်မှ စတင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဘက်မုဒ်ရှိ ကြေးသွန်းဘုရားကြီးရှေ့မှ ဆူးလေစေတီ၊ မြို့တော်ခန်းမရှေ့သို့ လမ်းလျှောက်ချီတက်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွင် သံဃာနှင့် ပြည်သူများ ပါဝင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မည်ဖြစ်ပြီး ဗဟန်းမြို့နယ်နှင့် ကျောက်တံတားမြို့နယ် ရဲစခန်းတို့မှ ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း မကွေးပရိယတ္တိစာသင်တိုက်မှ ဆရာတော် ဦးပါမောက္ခက မိန့်ကြားခဲ့သည်။